पल शाह हुन् नंम्बर वान ! • Gazzabko Online
Prem Pun || February 2, 2018 at 2:45 pm
नयाँ पुस्ताका अभिनेता हुन् पल शाह, अनमोल केसी र प्रदीप खड्का । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विगत केहि वर्ष देखि यी तीन अभिनेताको क्रेज बढ्दो छ । करिअरको सुरुवात पनि लगभग एउटै विन्दु्मा गरेका उनीहरुलाई एकअर्काको प्रतिष्पर्धीको रुपमा ब्याख्या गरिन्छ । बलिउडमा तीन खान भए जस्तै नेपालमा पनि पल, अनमोल र प्रदीपलाई सोही रुपमा हेर्न थालिएको छ । उनीहरु तीनै जनाको आफ्नै फ्यान फलोईङ छ । उनीहरुको चलचित्र रिलिज हुँदा हलहरुमा थामि नसक्नु भिड जम्मा हुन्छ ।
यी तीनै जनाल काम गर्ने फिल्म एउटै किसिमको हो । तीनै जना चक्लेटी अनुहारका छन् । तीनै जनाको लेडिज फ्यान फलोईङ धेरै छ । प्रायः रोमान्टिक हिरोको रुपमा तीनै जनाको क्रेज बढ्दो छ । पछिल्लो समय अनमोल केसीले आफ्नो रोमान्टिक छविलाई एक्शन अवतारको रुपमा ल्याउँदैछन् । पल र प्रदीपले पनि विस्तारै आफ्नो भूमिकामा फरकपन देलान् त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरुले गरेका सबै फिल्म हिट पनि छन् । उनीहरुका फिल्मले राम्रो ब्यापार गर्नुमा उनीहरुको क्रेज पनि प्रमुख हो । तीनै जना अफ्नो स्टारडम बनाउँदै छन् । पछिल्लो युवापुस्तलाई नेपाली फिल्ममा आर्कषण गर्न पल, अनमोल र प्रदीपको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
अनमोल केसीको डेब्यु फिल्म ‘होस्टेल’ र त्यसपछिका ‘जेरी’, ‘गाजलु’, ‘ड्रिम्स’ सबै सुपरहिट भए । आगामी फिल्म ‘कृ’ पनि हिट हुने निश्चित छ । त्यस्तै प्रदीप खड्काको पहिलो फिल्म ‘स्केप’ फ्लप भयो । दोस्रो फिल्म ‘प्रेमगीत’ हिट भयो । तेस्रो फिल्म ‘प्रेमगीत २’ पनि सुपरहिट भयो । चौँथो फिल्म ‘लिलिबिलि’ पनि हिट हुने पक्का छ । त्यस्तै पल शाहको कुरा गरौँ । म्युजिक भिडियोमा राम्रो क्रेज बनाइरहेका पल शाह ‘नाई नभन्नु ल ४’ बाट डेब्यु गरे । पहिलो फिल्म सुपरहिट भयो । दोस्रो फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ पनि सुपरहिट भयो । तेस्रो फिल्म ‘जोनी जेन्टमेन’ले ठिकै ब्यापार गर्यो । पलको चौँथो फिल्म ‘शत्रुगते’ले पनि बम्पर ब्यापार गर्ने पक्का छ ।
कुनै पनि फिल्मले हिटको पगरि गुत्थ्न बलियो कथा र उत्कृष्ठ निर्देशनको आवश्यकता त पर्छ नै । सँगसँगै अन्य धेरै कुराले फिल्म हिटका लागि महत्व राख्दछन् । त्यसमा कलाकारको भ्यालु र क्रेज पनि हो । बलिउड तथथा हलिउडमा कलाकारहरुको लोकप्रियता उनीहरुको फ्यान फलोईङको आधारमा पनि मुल्यांकन गरिन्छ । त्यसरी नै पल, अनमोल र प्रदीपको फ्यान फलोईङको मापन हामीले गरेका छौँ । कस्को फ्यान कति भन्ने निश्चित गन्ती गर्ने वैज्ञानिक आधार त केही छैन् । तर सामाजिक संजाल र प्रविधिले त्यसलाई केही सहज बनाएको छ । कुनै पनि ब्यक्ति कति लोकप्रिय छ ? त्यो कुराको निर्धारण उस्को फलोअर्सले जनाउँछ । हामी यहाँ पल, अनमोल र प्रदीप खड्काको फेसबुक फलोअर्सको बारेमा लेख्दैछौँ ।
पल, अनमोल र प्रदीपको फेसबुक फलोअर्सको कुरा गर्ने हो भने १ लाख बढि फलोअर्स सहित पल शाह नंम्बर वानमा छन् । दोस्रो नंम्बरमा अनमोल केसी छन् । उनलाई फेसबुकमा ८२ हजार बढिले फ्लो गर्छन् । तेस्रो नंम्बरमा प्रदीप खड्का छन् । प्रदीपलाई फेसबुकमा ५६ हजारले फ्लो गर्छन् । फेसबुक फलोअर्सको आधारमा लोकप्रियताको मापन गर्ने हो भने पल शाह नंम्बर वान अभिनेता हुन् । त्यसपछि मात्रै अनमोल र प्रदीपको नाम आउँछ ।